चुनाबमा गरेका वाचा पूरा गर्दै शक्तिराम – Janaubhar
चुनाबमा गरेका वाचा पूरा गर्दै शक्तिराम
प्रकाशित मितिः आइतवार, पुस ९, २०७४ | 176 Views ||
१०७ वर्षीय हरिप्रसाद श्रेष्ठ र उनकी पत्नी ९० वर्षीया सुन्दरी श्रेष्ठलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने क्रममा अध्यक्ष शक्तिराम डाँगी ।
दाङ । घोराही उपमहानगरपालिका १४ की मुगादेवी न्यौपाने (वर्ष ७०) खुशीले गदगद छिन् । उनलाई सरकारले दिदै आएको एकल महिला भत्ता लिन बैङ्क जान सकेकी थिइनन्, कारण उनको खुट्टा भाँच्चिएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गर्ने योजना बनाएपछि उनलाई बैङ्कसम्म जान समस्या भएको हो । उनी जस्ताको समस्या बुझेर घोराही उपमहानगरपालिका १४ का अध्यक्ष शक्तिराम डाँगीले घरमै पुगेर भत्ता वितरण गर्ने योजना बनाए । अध्यक्ष डाँगीले शुक्रबार आफ्नो वडामा रहेका ८० वर्ष माथिका तथा असक्त, अपाङ्ग जेष्ठ नागरिकहरुलाई घरमै गएर भत्ता वितरण गरे ।
भत्ता वितरण गर्न अध्यक्ष सँगै माछापुच्छ«े बैंकका कर्मचारीसमेत पुगेका थिए । भत्ता वितरण गर्न पुगेको टोलीलाई न्यौपानेले धन्यवादसमेत दिइन् । ‘खुट्टा भाँच्चिएका कारण बैंकसम्म जान सकेको थिइँन, वडा अध्यक्षले आफै ल्याई दिनुभयो खुशी लागेको छ ।’ न्यौपानेले भनिन् ।
त्यस्तै वर्ष ९५ का जमानसिं डाँगीले पनि खुसी लागेको बताए । ‘सरकार होस् त यस्तो पो ! भत्ता बैंकबाट पाउने भनेको त राम्रो हो तर पैसा निकाल्दा समस्या हुने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको थियो तर अध्यक्षले घरमै ल्याइदिए ।, डाँगीले भने, ‘खाता खोल्न घरमै आएको बेला पैसा पनि घरमै आएर दिए राम्रै हुन्थ्यो भनेको थिएँ, सुनेछन् ।’
त्यसैगरी वडा नं १४ कै वयोवृद्ध हरिप्रसाद श्रेष्ठ (वर्ष १०७) पनि घरमै भत्ता पाएपछि साह्रै खुसी थिए । साथमा उनी पत्नी सुन्दरी श्रेष्ठ (वर्ष ९०) पनि खुसी थिइन । उनीहरु दुबै जनाको खुसीको कारण बनिदिए वडा अध्यक्ष शक्तिराम । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ ले वडामा रहेका जेष्ठ नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरमै पुगेर दिएकोमा उनीहरु खुसी भएका हुन् ।
१ सय ७ वर्षको हुँदासम्म पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएका हरिप्रसादले अहिले पहिलो पटक सो सुविधा पाएको बताउँछन् । सरकारले २०५१ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको भए पनि अहिलेसम्म आफूले नपाएको उनले बताए । उनकी श्रीमती सुन्दरी श्रेष्ठले भने विगत ३ वर्षदेखि निरन्तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिदै आएकी थिइन् ।
उमेरले डाँडा काटेका हरिप्रसाद र उनकी श्रीमती बैंकसम्म पुगेर भत्ता लिन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । ‘हामीलाई सरकार भएको अनुभूति वडा अध्यक्ष शक्तिरामले दिलाइदिनुभयो’ हरिप्रसादकी बुहारी विनिता श्रेष्ठले बताइन् ।
धेरै नै वृद्ध भएका कारण उपचारका लागि घरबाट अस्पतालसम्म पु¥याउन समस्या भएको समयमा प्रत्येक महिना घरमै डाक्टर ल्याएर उपचार गर्ने व्यवस्था वडा कार्यालयले मिलाइदिएको श्रेष्ठले बताइन् । ‘घरमै डाक्टर आएर उपचार गरिदिनुहुन्छ, औषधीसमेत दिनुहुन्छ, भत्ता पनि घरमै आएर दिनुहुन्छ, हाम्रा लागि त शक्तिराम भगवान नै हो’ सुन्दरी श्रेष्ठले खुसी व्यक्त गरिन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दलले बृद्धभत्ता घरमै पुगेर वितरण गर्ने चुनावी नारा नै बनाएका थिए । अहिले त्यही वाचा पूरा गर्दैछन् घोराही १४ का अध्यक्ष शक्तिराम डाँगी ।
वडाका नागरिकहरु सबैले शक्तिरामको कामको प्रशंसा गर्दै आएका छन् । जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसमेत उनले घरमै पुगेर गर्दै आइरहेका छन् । जेष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य जाँच, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, नगर सरसफाइ तथा बजार व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेका शक्तिरामलाई वडाबासीले साँच्चिकै सरकार भएको अनुभूति दिलाएको बताउँछन् ।
‘वडाबासीको चाहनाअनुसार काम गर्न थालेको अध्यक्ष शक्तिराम डाँगी बताउँछन् । ‘हामी जनताका प्रतिनिधि हौं, आफ्नो वडालाई कसरी राम्रो बनाउने र वडाबासीको चाहनालाई हरसम्भव सार्थक तुल्याउने नै हाम्रो काम हो,’ शक्तिरामले भने, ‘काम गर्दा समस्या उत्पन्न हुन्छन्, हामीले गरेका कतिपय काम कसैलाई मन नपर्न पनि सक्छ तर समग्रमा धेरैको चाहना के हो त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं ।’
सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने योजना बनाएकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै बैङ्कसम्म आउन नसक्ने जेष्ठ नागरिकहरुलाई घरमै पुगेर सामाजिक भत्ता वितरण गरिरहेको डाँगीले बताए । सामाजिक भत्तासँगै वृद्धवृद्धाहरुको स्वास्थ्य जाँचलगायतका कामहरु पनि घरमै पुगेर गरिने उनले बताए ।
Prevपछाडी फर्किन नसक्ने गरी पुल भत्काएर अघि बढेका छौंः प्रचण्ड
Nextके हो एमाले र माओवादी बीचको सैद्धान्तिक मिलनविन्दु ?